Yahuudda oo duqeymo ka gaystaay qeybo kamid ah magaalada Dimishiq ee caasimadda Suuriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Yahuudda oo duqeymo ka gaystaay qeybo kamid ah magaalada Dimishiq ee caasimadda Suuriya.
On Dec 26, 2018 195 0
Barqinimadii maanta ayaa diyaaradaha Yahuudda waxay duqeymo ku garaaceen qeybo kamid ah magaalada Dimishiq iyo deegaannada hoos yimaada, halkaas oo ay ku suganyihiin ciidamada Nidaamka iyo malleeshiyaad shiico ah oo ka amar qaata dowladda Iiraan.
Wararka la helayo waxay xaqiijinayaan in duqeymuhu ay ahaayeen kuwa muda kooban socday, islamarkaana ay Yahuudu adeegsadeen diyaaradaha wax duqeeya iyo sidoo kale sawaariikhda ridada dheer, kuwaas oo la sheegay in laga soo tuuray qeybo kamid ah wadanka Lubnaan oo deris la ah Suuriya.
War lagu soo qoray barta twitterka ee ciidamada Yahuudu leeyihiin ayaa lagu xaqiijiyay duqeymaha dhacay, waxaana lagu sheegay in lagu beegsaday goobo iyo xarumo ay ku keydsanaayeen sawaariikhda oo ay leeyihiin malleeshiyaadka ururak Xisbullaata.
Wakaaladda wararka ee Nidaamka Nuseyriyada ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada difaaca cirka ay ku guuleysteen iney iska caabiyaan diyaaradaha, waxaana ay sheegteen iney hawada ku qarxiyeen gantaallo dhowr ah oo lagu soo tuuray.
Inkastoo la ogeyn halka ay gaarsiisantahay khasaaraha ay dhaliyeen duqeymahaas, hadana waxay wararka qaar sheegayaan in duqeymuhu ay beegsanayeen ahdaaf gaar ah oo ku yaala galbeedka magaalada DIimishiq.
Dhowr jeer oo hore waxay diyaaradaha Yahuudu duqeymo ka geysteen qeybo kamid ah wadanka Suuriya, waxaana jira colaad u dhexeysa Yahuudda iyo Shiicada, kuwaas oo isku hayo arimo maaddi ah, balse waxay kawada simanyihiin dagaalka iyo colaada ka dhanka ah Muslimiinta.